စာရွက်စာတမ်းအတုများ - အွန်လိုင်းအတုများဝယ်ယူရန် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ
- Select လုပ်ပါ - ဗြိတိန် Residence ကဒ်ကိုဝယ် ကနေဒါမှာတော့အလုပ် ကနေဒါဌာနေခွင့်လက်မှတ် IELTS လက်မှတ်ဝယ်ရန် မူရင်းမွေးဖွားခြင်းလက်မှတ်ဝယ်ရန် မူရင်းဗြိတိန် ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် ဂျာမန် ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် အီးယူနိုင်ငံများယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် ယူအက်စ်အေယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် (အားလုံးပြည်နယ်များရှိနိုင်ပါ) အခြားသတင်းများ Certificate Resident Permit IELTS လက်မှတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ယောဘကနေဒါကမ်းလှမ်း မူရင်းနယ်သာလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy အာရှနိုင်ငံများယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ် မှတ်ပုံတင်တရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy ကနေဒါယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် ပိုလနျ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် ဂျာမန်ယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် အီတလီ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် ဆွီဒင်ယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် မှတ်ပုံတင် Diploma Buy မှတ်ပုံတင်အီတလီယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအီးယူနိုင်ငံဗီဇာ Get ဟနျဂရေီယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူ Buy ရီးရဲလ်အတုအမေရိကန်အစိမ်းရောင်ကဒ် ရီးရဲလ်ဗြိတိန်ယာဉ်မောင်းရဲ့ Lisence Buy ဆွီဒင်ဌာနေခွင့်လက်မှတ်ကိုဝယ် ရိုမေးနီးယားယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် မှတ်ပုံတင် ဘယ်လဂျီယံယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် မူရင်းကိုရီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝယ်ယူရန် စပိန်ယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် အာရှနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy ပိုလနျယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ် အီးယူနိုင်ငံများသည်အပြည့်အဝသတ်မှတ်ခြင်း Package ကို Buy ပြင်သစ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ် အတုဘယ်လ်ဂျီယံ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် သြစတြီးယားယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် ဂျာမန် ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် ပေါ်တူဂီယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် အာရှနိုင်ငံများ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ် နော်ဝေယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူ စစ်မှန်သော TOFL Buy ဘူဂေးရီးယားယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်သည် Apply စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ရေးလက်မှတ်ဝယ်ရန် နယ်သာလန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုရယူလိုက်ပါ USA နဲ့ကနေဒါဗီဇာသည် Apply ဒိန်းမတ်ယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဝယ် ဗြိတိန်ဗီဇာလျှောက်ထား ဆွစ်ဇာလန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / ဆွစ်ဇာလန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ် ကနေဒါမှာတော့ကျောင်းစာအုပ် တရားဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy အီးယူနိုင်ငံများဌာနေခွင့်လက်မှတ် ရီးရဲလ်ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy အီတလီဌာနေခွင့်လက်မှတ် အီးယူနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy ရရှိနိုင်သောအာရှနိုင်ငံများဌာနေခွင့်လက်မှတ် မူရင်းဗြိတိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Buy ဗြိတိန် Residence ကဒ်ကိုဝယ် ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်
ရီးရဲလ်ဗြိတိန်ယာဉ်မောင်းရဲ့ Lisence Buy
ဆွစ်ဇာလန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / ဆွစ်ဇာလန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ်
မူရင်းဗြိတိန် ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
အီးယူနိုင်ငံများသည်အပြည့်အဝသတ်မှတ်ခြင်း Package ကို Buy
ပိုလနျ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
အတုဘယ်လ်ဂျီယံ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
ဂျာမန် ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
အီတလီ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
အာရှနိုင်ငံများ ID ကိုကဒ်များကိုဝယ်
စစ်မှန်သော TOFL Buy
မှတ်ပုံတင် Diploma Buy
USA နဲ့ကနေဒါဗီဇာသည် Apply
ဗြိတိန် Residence ကဒ်ကိုဝယ်
လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူပါ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတုကိုဝယ်ပါ Scanable ID ကဒ် အတု ID ကဒ် မှတ်ပုံတင်ထားသော PASSPORT | အတုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | မွေးနေ့လက်မှတ်အတု | နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်များဝယ်ယူပါ အတုလက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ထားသော IELTS စာမေးပွဲများနှင့်အပိုများ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှာကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းသက်သေပြချက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတုစာရွက်စာတမ်းထုတ်လုပ်မှုစုစည်းထားတဲ့တစ်ခုဖွင့်လှစ်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးမီလစဉ် output ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ count ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးအပ်သည်။ အဆိုပါအရေအတွက်မှန်မှန်လတ်ဆတ်တဲ့လစဉ်စာရင်းဇယားတွေနဲ့ update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ clients ဤ website မှတဆင့်လျှောက်ထားရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်မူတည်ပြီးကျနော်တို့ကသူတို့တောငျးဆိုခကျြကိုင်တွယ်ရသောအေဂျင်စီဆုံးဖြတ်။ ပိုများသောအေဂျင်စီများကဒီအဖွဲ့အစည်းကို join ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ကိုသာလျှောက်ထားပထမသုံးစာရွက်စာတမ်းများကယ်တင်တဲ့အခါမှာ applications များမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းဝင်ကြေးပေးဆောင်။ ကျနော်တို့များကိုစာရွက်စာတမ်းများ, အတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်ပုံတင်အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်, etc, အတုအိုင်ဒီမှတ်ပုံတင်အတုနေထိုင်သူမစ်မှတ်ပုံတင်, အတုလက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်, မှတ်ပုံတင် IELTS လက်မှတ်ဝယ်အတုဒီပလိုမာမှတ်ပုံတင် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်
စက်တင်ဘာလ 2019 အတွက်လစဉ်စာရင်းဇယား -
ရီးရဲလ်အတု ID ကိုကတ်များ
မှတ်ချက်: ကမ္တာ့စာရွက်စာတမ်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်နမူနာဓါတ်ပုံတွေကိုပို့စ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ client ကိုသတင်းအချက်အလက်လျှို့ဝှက်ဖြစ်နေဆဲလို့ပဲ။ သို့သျောလညျးသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, တူနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်အဘို့အသင်သည်သူတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရယူရနျကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်တဦးတည်းနှင့်အတူထိတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်, စသည်တို့အလိုတော်ကိုမြင်ရဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။
| အစစ်အမှန်ဝယ် အွန်လိုင်းအတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
လမ်းအသုံးပြုသူများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦးကယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုအညီအမျှကိုင်ဆောင်ထားသူလည်ပတ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ပါသည်။ သို့သော်အခက်အခဲတွေအများကြီးတကမ္ဘာလုံးတစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတဲ့အတွက်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆန္ဒရှိနေသောလူများအတွက်တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မြန်ဆန်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်နိုင်မှကျနော်တို့ဂရုတစိုက်တသမတ်တည်း၎င်းတို့၏ဒေသတွင်း၌ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့နှင့်အချိန်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြကြသူအပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့အတူကိုငျတှယျ။
ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းကျောင်းကိုပိုင်ရှင်တွေ, ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေးဂျင့်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိများကကားမောင်း 132 ကျော်ပါဝင်သည်။ ဒီအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူကျနော်တို့လိုင်စင်ကိုတရားဝင်အစိုးရ databases ကိုပေါ်သူတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ငါတို့အေဂျင်စီများမှတဆင့်ဝယ်ယူယာဉ်မောင်းတရားဝင်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗြိတိန်တွင်ကျနော်တို့ DLA နှင့် DVLA ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်။ အစစ်အမှန်ယာဉ်မောင်းရိုးရှင်းစွာဤနေရာတွင်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့်အွန်လိုင်းလိုင်စင်ဝယ်ပါ။ မောင်းနှင်မှုစာမေးပွဲ၏အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု, လကြာမျှစောင့်ဆိုင်းမရှိရပ်ဆိုင်းမှု။ တရားဝင်မောင်း။
ကျွန်တော်တို့ဆီကတစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရဖို့သင်ရပါလိမ့်မယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်သို့မှသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ။ သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ချင်တယ်ဆိုရင်လျှောက်လွှာပုံစံပေါ်တွင်ရွေးချယ်ဖို့သတိရပါ။
Real and Fake ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည်ခြားနား
ကမ္တာ့စာရွက်စာတမ်းများမှရီးရဲလ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုအစိုးရက databases ကိုအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြသည်နှင့်မဆိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်များအတွက်အတည်ပြုလိမ့်မည်။ တကယ့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်အတူသင်ပင်ယာဉ်မတော်တဆမှုများကိစ္စများတွင်အားလုံးစစ်ဆေးမှုများနှင့်စိစစ်အတည်ပြုအတွက်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုတကယ့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့တူတာကိုကြည့်ရှုသည်။ သို့သော်အတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၏သတင်းအချက်အလက်များမဆိုအစိုးရဒေတာဘေ့စပေါ်မှတ်ပုံတင်မပေးပါ။ ဒါကအတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသုံးပြုသူလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်များကိုမလွန်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့စျေးပေါဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရွာများတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကသာအတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုဝယ်ကြလော့။
အစစ်အမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝယ် | အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အွန်လိုင်း
သငျသညျအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာအွန်လိုင်းအမှန်တကယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုအလွန်သူတို့ရဲ့အိပ်မက်နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပိုလွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခရီးသွားအခြားလူရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအမှန်တကယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရန်, ဖွင့်ဒီ site မှတဆင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ချင်သောလျှောက်လွှာပုံစံ၏တိုတောင်းသောမှတ်စုများအပိုင်းအတွက်ကိုသတ်မှတ်။ ကြောင်းအသေးစိတ်အပြင်လည်းတိကျသောသင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှကယ်နှုတ်ခံရဖို့လိုချင်တာတွေတိုင်းပြည်ပုံစံပေါ်မှာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ထုတ်လုပ်လုပ်ငန်းများ၌, မှတ်ပုံတင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client နှင့်စိတ်ချလက်ချသူတို့သွားလေရာရာ၌ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အလုပ်အတွက်အသုံးပြုကြောင်းစေ့စပ်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်။ သူတို့ရန်သင့်အားလမျးညှနျဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်ဖွင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့တကယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထား။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မဝယ်နဲ့ပြောက်ကျားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပဲအသုံးပြုချင်သူအချို့ client များအတွက်အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်လုပ်ရန်။ အဆိုပါအတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံအစစ်အမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, တူညီတဲ့အရည်အသွေးနှင့်လျှို့ဝှက် features တွေနဲ့တူလှပါတယ်။
သို့သော်အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အစစ်အမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြားခြားနားချက်သင်အွန်လိုင်းအတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဝယ်သောအခါ, အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သတင်းအချက်အလက်မဆိုအစိုးရဒေတာဘေ့စအတွက်မှတ်ပုံမတင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အစိုးရ databases ကိုပေါ်အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းလေဆိပ် Scan ဖတ်အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအားနည်းချက်အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆောင်လုလင်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများဆုံး clients များဟာသူတို့ရဲ့စျေးပေါစျေးနှုန်းများဘို့ငါတို့အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်ဖို့ခစျြလိမျ့မညျသလောက်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင့်သူတို့စျေးကြီးပိုပြီးစျေးကြီးတယ်သော်လည်း, အစစ်အမှန်ပတ်စ်ပို့အဘို့သွားကြဖို့သူတို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းစာရင်း update လုပ်ဖို့ကောင်းသောအမှုကိုပြုရကြမည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပါနဲ့သူတို့အတုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအတွက်လျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ပါရန်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
အွန်လိုင်းအစစ်အမှန် ID ကိုကဒ်ဝယ်မည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်အိုင်ဒီကတ်များထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှအစစ်အမှန် ID ကိုကဒ်များ၏အရည်အသွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ရောင်းရန်အစစ်အမှန် ID ကိုကဒ်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးအပြင်ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေညာဘက်အစိုးရဒေတာဘေ့စစနစ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်သေချာပါစေ။ သငျသညျအစိုးရ data တွေကိုစိစစ်အတည်ပြုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စက်တွေသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန် ID ကိုကဒ်များကိုယူပြီးကြောက်ရွံ့ဘာမျှမရှိသည်။ သငျသညျလျှောက်ထားဖို့လမ်းညွှန်ဒီတော့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ရီးရဲလ် ID ကိုကဒ်များလျှောက်လွှာပုံစံ.
အွန်လိုင်းအတု ID ကိုကဒ်ဝယ်မည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းရဲ့အတု ID ကိုကဒ်များကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးအညီအမျှဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှ get အစစ်အမှန် ID ကိုကတ်များမတူဘဲ, အတု ID ကိုကဒ်များအစိုးရ databases ကိုမှတ်ပုံတင်မထားပေ။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏အတု ID ကိုကတ်များကိုငါ့ ID ကိုကဒ်များ data တွေကိုစိစစ်အတည်ပြုစကင်နာအတည်ပြုကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ပေါ်တွင်အတု ID ကိုကဒ်ကိုဝယ်လမ်းညွှန်မှုဘို့ငါတို့အေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်နှင့်တဆင့်လျှောက်ထားရန် အတု ID ကိုကဒ်လျှောက်လွှာပုံစံ.
အစစ်အမှန် Resident Permit ဝယ်
ကြှနျုပျတို့၏ "မဝယ်နေအိမ်သို့ပါမစ်" မှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှအစစ်အမှန်နေထိုင်သူခွင့်ပါမစ်ကိုဝယ် လျှောက်လွှာပုံစံများကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သင့်ရဲ့အကြိုက်မဆိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌သင်တို့၏ဥပဒေရေးရာနေထိုင်အာမခံခွင့်ပြုထားသည်။ ဥပမာအမေရိကန်အစိမ်းရောင်ကဒ်များကိုကမ္ဘာ့အများဆုံးစျေးနှုန်းနေအိမ်သို့ပါမစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သမ္မာသတိကိုသင့်လူဝင်မှုအဆင့်အတန်းသတင်းအချက်အလက်ကိုင်တွယ်နှင့်သင့်အိပ်မက်တိုင်းပြည်၌သင်တို့၏နေထိုင်တရားဝင်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူသငျသညျ, မူရင်းနေထိုင်ရာခွင့်ပါမစ်ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်အမေရိကန် Green Card ဝယ်ကနေဒါနေအိမ်သို့ပါမစ်မဝယ်, ဂျာမန်နေအိမ်သို့ပါမစ်မဝယ်နှင့်စာရေးတံကျပိုနိုငျသညျ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေးခယျြမှု၏တည်နေရာကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့နေထိုင်သူကတ်များကယ်နှုတ်တော်မူ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့် ဒီမှာကသင်၏နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထား။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုအောင်မြင်စွာလိုအပ်နေသောဖောက်သည်အများအပြားကိုပညာရေးနှင့်လူမှုရေးလက်မှတ်များထောက်ပံ့ပါပြီ။ 2019 အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာလက်မှတ်များကိုလျှောက်လွှာအွန်လိုင်း IELTS လက်မှတ်များလျှောက်ထားသူတွေကိုအားဖြင့် predominated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ clients များအားဖြင့်, အွန်လိုင်းဗြိတိသျှကောင်စီ IELTS လက်မှတ်များဝယ်ဖို့အွန်လိုင်းကင်းဘရစ် IELTS လက်မှတ်များဝယ်ဖို့, အွန်လိုင်း IDP IELTS လက်မှတ်ဝယ်ဖို့သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ညီတူညီမျှကောလိပ်ဒီပလိုမာနှင့်တက္ကသိုလ်လက်မှတ်များ, G. အသင်္ချာ, TOFL နှင့်များစွာသောအခြားသူတွေကိုပေး။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်သောလက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အထဲကရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျနော်တို့ရုံသင်သည်သင်၏အိပ်မက်အလုပ်ရကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်ထောက်ပံ့လူမှုလက်မှတ်များပါဝင်သည်: လက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ်များ, သေခြင်းလက်မှတ်များ, မွေးဖွားလက်မှတ်များနှင့်အများကြီးပို။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သင့်ရဲ့လက်မှတ်များလျှောက်ထား။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားလျှောက်ထား profile များကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေရန်၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်လျှောက်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ thourh လျှောက်ထား အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ client များအတွက်အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကနေဒါ, UAB, အမေရိကန်, ဥရောပနှင့်တောင်ကိုရီးယားကသူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူတို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများလုပ်ငန်းများ၌ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို Upload လုပ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်ကိုသင်ဆက်သွယ်ပါနဲ့မျှော်လင့်သင့်ရဲ့အိပ်မက် destination သည်သင်တို့အဘို့အလုပ်တစ်ခုပွဲတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ဗီဇာဖြစ်စဉ်များအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အချို့သောနိုင်ငံများရှိအလုပ်အကိုင်များချင်သူကို client များရှိခဲ့ပါပြီ။ ကနေဒါ၏အမှု၌, ထိုကဲ့သို့သော clients များ LMIA အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတည်ပြုထွက်ဖြစ်ကြသည်။
Inter အေဂျင်စီ COPERATION
ဂလိုဘယ်ကျော်ကမ္ဘာတဝှမ်းအေဂျင်စီများထုတ်လုပ်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူ fraternizing ၏အားသာချက်များအပေါ်အလေးအနက်ဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက၎င်း၏နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ရန်လိုလားသည်ဟုဆို legit အေဂျင်စီကျွန်တော်တို့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လျှောက်ထားသင့်ကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအကြံဉာဏ်ကို။ ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်အသေးစိတ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျရကြလိမ့်မည်နှင့်ပြန်, သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်လက်ရှိစံချိန်စံညွှန်းမှတက်နေဖို့ကြောင်းသေချာစေရန်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်အေဂျင်စီထံမှအကူအညီရနိုင်။ ကြောင်းအပြင်, client ကိုအေဂျင်စီများပေးပို့ဆုံးရှုံးမှုများ၏အရေအတွက်တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်မှုကိုလျှော့ချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအဖွဲ့များ၏ဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက်အကူအညီရယူပါ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို join ဖို့, သင်သည်ဤ website ကို link ကိုတဆင့်လျှောက်ထား (join ဖို့ Apply) နှင့်သင့်ဒေသတွင်အောင်မြင်စွာသုံးစာရွက်စာတမ်းများပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်စွမ်းရည်သက်သေပြသင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ကိုရှိရမည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လက်ခံခဲ့သည်အခါ, သငျသညျ 5000 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ဒီမှာအမေရိကန် CONTACT ။
join ဖို့ Apply